Ha baby love — Steemit
Ha baby love
goldenmyanmar (40)in #artzone •3years ago
"Post-စက်မှုဇုန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း" ဟု (၎င်း၏ဝမ်းကွဲနှင့်အတူ "စက်မှုဇုန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း" နှင့် "ယခင်ကစက်မှုဇုန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း") တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
မဟာ Plains ဒါမှမဟုတ်ကျောက်တောင်တန်းနှင့်အတူသကဲ့သို့, အရှေ့နဲ့အနောက်ကမ်းရိုးတန်းဆို, ဒါမှမဟုတ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင် features တွေနှင့်အတူရှိပါသည်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမကသဘာဝနယ်နိမိတ်ရှိပါတယ်။
(ထိုဒေသ rebrand မှမကြာသေးမီကြိုးစားမှုကို "Trust မှခါးပတ်," ကို "နယူးအမေရိကန်ဗဟို, ပါဝင်သည်အစားထိုးရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြသည်သူတစ်ဦးသာရှိပြီးဆက်ပြောပါတယ်ရှိပါတယ် "နှငျ့" ရေချိုဒေသကြီး ") ။
အချေးခါးပတ်, စှဲစကားပြော, အမေရိကားရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြီးအကျယ် Walter Mondale, ရှိသမျှသောလူတို့က 1984 ခုနှစ်ခေတ်စားလာခဲ့သည်။
သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရပ်နားမှာ Mondale သူအကျပ်အတည်းသို့စက်မှုလုပ်ငန်းလှေတျတျောမူခဲ့သောကုန်သွယ်ရေး, သံမဏိတင်သွင်းမှုအပေါ်ခွဲတမ်း၏အထူးသဖြင့်ရုတ်သိမ်းပေါ်တွင်ရေဂင်ရဲ့အနေအထားကိုရှုတ်ချပြောဆိုပြီးအရာရှိ Cleveland အတွက် LTV စက်ရုံမှာ steelworkers တစ်ဦးမိန့်ခွန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကထားသကဲ့သို့ "ရေဂင်ရဲ့မူဝါဒများတစ်ဦးသံချေးပန်းကန်လုံးထဲသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းလှည့်နေကြတယ်။ " ဟူသောဝေါဟာရကိုရှံမုနျးခဲ့သညျ, နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်သုံးခုများအတွက်ချီးကျူးထောပနာနှင့်သရုပျခှဲ။ အထူးသဖြင့်ဟူသောဝေါဟာရကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်သတိရသူကလေး boomers အကြား - - ကထောင်ချီစဉ်းစားပါက
သို့သော်အသုံးအနှုန်းမှီဝဲသိရသည်။ ဘယ်မှာ၏အဓိပ္ပာယ်, အတိအကျ, အချေးခါးပတ်လည်းမကြာခဏအခြေအတင်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မထူးရှိပါသည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းပထဝီအားဖြင့်ပေမယ့်နိုင်ငံရေးသမားနှင့်မီဒီယာများကတီထွင်မခံခဲ့ရပါဘူး။
"သံချေးခါးပတ်" "နယူးအင်္ဂလန်" ကဲ့သို့တစ်ဦးသမိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် "Sun ကခါးပတ်" (ပင် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း" ပထဝီအဖြစ်သမိုင်းဝင်အဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်) ။
မီချီဂန်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်နှင့် Pennsylvania ပြည်နယ်ဒေသတွင်းဗဟိုဖြစ်ကြသည်အဖြစ်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, Wisconsin ပြည်နယ်, နှင့် New York မြို့၏အစိတ်အပိုင်းများ။ "အမျှဝေးအနောက်ဘက် Milwaukee အဖြစ်နှင့်အမျှဝေးအရှေ့ Buffalo အဖြစ်" များသောအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောစင်စင်နာတီနှင့် St. Louis အဖြစ် Borderlands, အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သော Appalachia အဖြစ်ဒေသများ abutting, ဘီယာကျော်ငြင်းခုံဖို့ပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည် - သူတို့ဖြစ်ကြသည်ရုံဘယ်လောက်သံချေးတက်? - အဆုံး၌ကား, ဘယ်နေရာမှာမဆိုတစ်ဦးစီးပွားရေးမှာယခင်ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ပြီးကတည်းကလူဦးရေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအဆိုပါဂိုဏ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Picador ဤသည်မှာလည်းနိုင်ငံတကာကစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါသည် - တရုတ်နှင့်ရုရှားနှင့်ဂျာမနီနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏သမိုင်းနှင့်အတူဖွင့်အကြောင်းကိုမဆိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတခါစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်အခြေခံပြီးရာသံချေးခါးပတ်ရှိသည်နှင့်ယခုမရှိတော့ဟူမူကား,
အနည်းဆုံး, ထိုကဲ့သို့သောကျဆင်းနေဒေသများတွင်သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကအမေရိကန်သတင်းစာများကမကြာသေးမီမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာခဲ့ပိုပြီးထက် 2016 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူစတင်ကာဟူသောဝေါဟာရကိုပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ရှေ့မှာပဲ Walter Mondale ကဲ့သို့မဲဆွယ်စည်းရုံးနေသူ Donald Trump နှင့် Bernie Sanders ၏ထို့နောက်-အံ့သြစရာလူကြိုက်များဖော်ပြရန်, အသုံးပြုခဲ့သည်, ပိုပြီးတင်းကျပ်ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများအဘို့။ Trump ရဲ့ထောက်ခံမှုတောင်, အနောက်, နှင့် New York နဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတူသောအပြာပြည်နယ်များရဲ့နေရာအများအပြားမှာခိုင်မာတဲ့ခဲ့ပေမယ့်, Trump ကြိုတင်တန်ခိုးအာနုဘော်ကနေအမေရိကတိုက်ရဲ့ပြိုလဲခြင်းဥပမာတစ်ခုအဖြစ်သံချေးခါးပတ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တခြားနေရာနိုင်ငံအတွင်း Trump ရဲ့တန်းတူသို့မဟုတ် သာ. ကွီးမွတျထောကျပံ့နေသော်လည်း, နောက်တဖန် - ရွေးကောက်ပွဲကတည်းကဟူသောဝေါဟာရကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဒါချေါသံချေးခါးပတ်ဒေသအတွင်း Trump ၏အယူခံဝင်နားလည်ရန်ရှာကြံဆောင်းပါးများထဲမှာ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအတွက် ပို. ပင်မကြာခဏပေါ်လာဖို့ဆက်လက်သိရသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်မီဒီယာများကကိုးကားသံချေးခါးပတ်ဒုက္ခများများအတွက်အသုံးအများဆုံးတရားခံမြောက်အတ္တလန္တိတ်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ NAFTA တစ်ဦးလူကြိုက်များသည့်နိုင်ငံရေးစကားပြောအချက်ဖြစ်လာသည်သော်လည်း, ဒေသတွင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုအလယ်တန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Mondale ်နယ်ရေဂင်၏မူဝါဒများအပေါ်အပြစ်တင်တင်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ပင်အစောပိုင်းက, 1970 ခုနှစ်, ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြင့်မားသောသံမဏိများအတွက်ဝယ်လိုအား, မဆုတ်မှစတင်ခဲ့သောနှင့်များစွာသောသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များပျောက်ကွယ်သွားကိုမြင်တော်မူ၏။ ပွဲတစ်ပွဲသံချေးခါးပတ်သမိုငျးတှငျအမြားဆုံးသင်္ကေတရက်စွဲကိုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွင်းရှိယန်စာရွက်နှင့် Tube အချို့လေးသောင်းအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုမှဦးဆောင်ကျပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမဲရောင်တနင်္လာနေ့စက်တင်ဘာလ 19, 1977, ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ထင်ရှားတဲ့: ဒေသတွင်းလူဦးရေရဲ့ 1970 ခုနှစ်အထွတ်အထိပ်သို့နှင့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကကျဆင်းမှုအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူများသည်ထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များ 1970 တွင်တွေ့မြင်အဆင့်သို့ပြန်လာမယ့်ဘယ်တော့မှနေကြသည်။ အဖြူရောင်အလုပ်လုပ်လူတန်းစားများအတွက်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းယခုလေးဆယ်ကျော်နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြဿနာခဲ့ - တာရှည်အိုဘားမားကလင်တန်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ရေဂင်မီ။ VideoCOMING UP Play ... စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တရုတ်ပြည်မနှင့်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ကိုကြောက်ရွံ့ဒုတိယနေ့အဘို့မဇ္ဈိမ မည်သည့်စီးပွားရေးကို - - ဒါဟူသောဝေါဟာရကို "သံချေးခါးပတ်က" ကြိုက်တယ်ဖူးဘူးသောသူတို့အားနှင့်စီးပွားရေးဆန္ဒရှိသောသူတို့အားနှစ်ဦးစလုံး၏ consternation ငှါ, ဒေသသတ်မှတ်ဆက်လက်ဖွင့်ပြပါနှင့် quaint ရှေးဟောင်းပစ္စည်းမှပွင့်လင်းအနာကနေ "သံချေးခါးပတ်" ကိုဖွင့်မယ်လို့ ။ ဟူသောဝေါဟာရကိုပထဝီအလွှာကင်းမဲ့စေခြင်းငှါစဉ်နှင့်အညီ, ကသမိုင်းဝင်အလွှာရှိပါတယ်, သူတို့အထူ redolent ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများဆုံးရှုံးမှုမွေးသော, ဒါပေမယ့် texture, အတိမ်အနက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဆယ်စုနှစ် '' တန်ဖိုးရှိဝယ်ယူခဲ့သည်။ ပိုပြီးလူများ 2016 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကတည်းကချေးခါးပတ်အကြောင်းကိုစပ်စုဖြစ်လာကြပါပြီတဲ့ကြိုဆိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် ပို. ပို. အန္တရာယ်များသော - - ဒါပေမယ့် ပို. ပို. သွေးဆောင်ဖြစ်လာသည်clichéဖို့သံချေးခါးပတ်လျော့ချရန်။ ဒီရှုပ်ထွေးဒေသ၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ရန်အစဉ်အဆက်ထက် ပို. အရေးကြီးသည်တဲ့အခါအဲဒီအချိန်တုန်းကအဘယ်အရာကိုအစားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏ "ပုံမှန်" သံချေးခါးပတ်နေထိုင်သူအပေါ်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည် - ပိုပြီးမကြာခဏမထက်အဖြူရောင်အထီး Trump ထောက်ခံသူ။ အဆိုပါ Regis အကြောင်းကို General
a hkyaayy hkarr paat, hchaell hcakarrpyaww, aamayrikarr rae noutsonepaw days taithku hpyitparsai . narmataw koaamhae pyu. aakyeeaakyaal Walter Mondale, shisamyaha saw luu thoetk 1984 hkunhait hkayathcarrlar hkaesai . sammatarwaykoutpwal karlaaatwin tait mellswalhcaeeronerayy rautnarrmhar Mondale suu aakyautaataee shoet hcaatmhulotengaann lhaay tya tyaww muu hkaesaw koneswalrayy, sanmani tainswinmhu aapaw hkwaltam eata htuu s hpyint rotesaim pawtwin ray gain rae aanayaahtarrko shotehkya pyawwsopyeeaararshi Cleveland aatwat LTV hcaatronemhar steelworkers tait u mein hkwann hpaansainn tawmuueat . suu k htarrsakaeshoet " ray gain rae muuwardamyarr tait u san hkyaayy paannkaan lone htellshoet kyawantawthoetrae hcaatmhu aamayrikaanpyihtaunghcu aanoutbhaat aalaalpine lha eet naykyataal . " huusaw wawharrako shan mu nya hkae s nyya, noutpine saalhcunhait sonehku myarraatwat hkyaeekyauu htaw p nar nhaint sarupya hkhaell . aahtuu s hpyint huusaw wawharrako hcatain sonehcwal hkaesai yahkuaahkyanetwin satir suukalayy boomers aakyarr - - k htaunghkyae hcain hcarr park ( htodays rebrand mha makyaarsayyme kyaoehcarrmhuko "Trust mha hkarr paat," ko " nayuu aamayrikaan baho, parwainsai aahcarrhtoe shisai hphoet kyaoehcarrkya sai suu tait u sarshipyee saatpyawwpartaalshipartaal " nhangya" ray hkyaodaysakyee ") . shoetsaw aasoneaanhuann mhae well sirasai . bhaalmhar eat aadhipparal, aatiaakya,ahkyaayy hkarr paat laee makyaarhkan aahkyayaatain swaynway naykyataal hpyitpartaal . m htuu shiparsai . aasopar aasoneaanhuann pahtawe aarr hpyint paymaae ninenganrayysamarr nhaint medeyarmyarr k tehtwin m hkanhkaer parbhuu . mahar Plains darmhamahote kyawwat taungtaann nhaint aatuu sakaeshoet, aashae nae aanout kamroetaann so, darmhamahote myay myetnharswinpyin features tway nhaint aatuu shiparsai aahpyitabhaalsuu myaha m k sabharw naalnimate shipartaal . " san hkyaayy hkarr paat" " nayuu aain g laan" kaeshoet tait u saminesinerar aasoneaanhuannhpyitpartaal "Sun k hkarr paat" (pain " aamayrikaanpyihtaunghcu aanoutbhaat aalaalpine" pahtawe aahpyit saminewain aahpyit tar hpyitpartaal) . "Post- hcaatmhujone aamayrikaanpyihtaunghcu aanoutbhaat aalaalpine" hu ( ၎inneat wamkwal nhaintaatuu " hcaatmhujone aamayrikaanpyihtaunghcu aanoutbhaat aalaalpine" nhaint " yahkaink hcaatmhujone aamayrikaanpyihtaunghcu aanoutbhaat aalaalpine") taitloneko aadhipparaltuu synonym aahpyit saungrwat ninepartaal . me hkyae gaan, ao hine yoe pyinaalnhaint Pennsylvania pyinaal daysatwin baho hpyitkyasai aahpyit ae le nwite pyinaal, Wisconsin pyinaal, nhaint New York myahoeteat aahcateaapinemyarr . " aamyaha wayyaanoutbhaat Milwaukee aahpyit nhaint aamyaha wayyaashae Buffalo aahpyit" myarrsaw aarr hpyint aalotelote sai . htokaeshoetsaw hcain hcain nar tenhaint St. Louis aahpyit Borderlands, aahpyit kaungghcwarkaeshoetsaw Appalachia aahpyitdaysamyarr abutting, bheyar kyaw ngyinn hkone hphoet pyawhcarar shinineparsai - suuthoet hpyitkyasai rone bhaallout sanhkyaayytaat? -asone karr, bhaalnayrarmhar m so tait u hceepwarrrayymhar yahkaink kone htotelotemhu aapaw aahkyayhkanpyee hkaepyee kataeek luu u ray soneshone hkaepyee aasopar gon eat aahcateaapine taithku hpyitnineparsai . Picador isaimhar laee ninengantakark hcaitmhaantaehpyitparsai - tarote nhaint rusharr nhaint gyaarmane nhaint kone htotelotemhu eat samine nhaint aatuu hpw int aakyaunggko m so tinepyi hceepwarrrayy tahkar hcaatmhulotengaann aapaw aahkyayhkanpyee rar san hkyaayy hkarr paat shisai nhang yahku mashitot huu muu karr, aanaeesone, htokaeshoetsaw kyasainnnay daysamyarrtwin satainn hkaunggkyee pinetwin mhar hpawpyahtarrtae pone hpyitpartaal . k aamayrikaan satainnhcarmyarrk makyaarsayyme mhaat nyarn htellmhar hkae popyeehtaat 2016 sammatarwaykoutpwal nhaint aatuu hcatainkar huusaw wawharrako ponemhaan aarr hpyint suuthoet shaemharpell Walter Mondale kaeshoet mellswalhcaeerone naysuu Donald Trump nhaint Bernie Sanders eat hthoetnout- aan sya hcarar luukyaitemyarr hpawpyaraan, aasonepyu hkaesai, popyee tainnkyaut koneswalrayy muuwardamyarrabhhoet . Trump rae htouthkanmhu taung, aanout, nhaint New York nae kaallehpoeneeyarr tuusawapyaar pyinaalmyarr rae nayrar aamyarraapyarr mhar hkinemartae hkae paymay , Trump kyaotain taanhkoe aar nu bhaw k nay aamayrikatite rae pyaolell hkyinn upamar taithkuaahpyit san hkyaayy hkarr paat ko aasonepyu hkaesai . tahkyarrnayrarninenganaatwin Trump rae taanntuushoetmahote sar. kwee mw tya htaw kya pan naysawlaee, nouttahpaan - rwaykoutpwal kataeek huusaw wawharrako ponemhaan aarr hpyint dar hkyaaw san hkyaayy hkarr paatdaysaaatwin Trump eat aayuuhkan wain narrlai raan sharkyaan saunggparrmyarr htellmhar, hkayatrayhceekyaungg medeyaraatwat po. pain makyaarhkan pawlar hphoet saatlaat sirasai . ninenganrayysamarrmyarr nhaint medeyarmyarr k koekarr san hkyaayy hkarr paat dukhkamyarr myarraatwat aasoneaamyarrsone tararrhkan myawwat aattalantate lwatlautsaw koneswalmhu sabhawtuunyehkyet hpyitpartaal . NAFTA tait u luukyaitemyarr saeet ninenganrayy hcakarrpyaww aahkyet hpyitlarsai sawlaee, daysatwin aapaw saatroutmhu aalaaltaann hpyithkaesai . Mondale naal ray gain eat muuward myarraapaw aapyittain tainlitetaal . darpaymaae pain aahcawpinek, 1970 hkunhait, dutiyakambharhcaitaatwin myang marr saw sanmani myarraatwat waalloaarr, masote mha hcatainhkaesaw nhang myarrhcwarsaw suuthoeteat aaloteaakinemyarr pyawwatkwalswarr ko myin tawmuueat . pwaltaitpwal san hkyaayy hkarr paat s mongya thangya aamyarr sone sain kay t raathcwal ko ao hine yoe pyinaal aatwinshi yaan hcarrwatnhaint Tube aahkyahoet layysaungg aaloteaakine soneshonemhu mha u saung kya patelitetae aahkarmhar aamellraung tanainlarnaehcaattainbharl 19, 1977, hpyithkaesai . daraapyin htainsharrtae: daysatwin luu u rayrae 1970 hkunhait aahtwataahtiut shoet nhaintahcainasaat kataeek kyasainnmhu aatwat hpyithkaesai . suumyarrsai htoteloteaaloteaakinemyarr 1970 twin twaemyin aasaint shoet pyanlar m ae bhaaltotmha naykyasai . aahpyauuraung aalotelote luutaannhcarr myarraatwat aaloteaakinemyarr nhaintahkwinalam mashihkyinn yahku layysaalkyaw nhaitpaungg tait u saatlaat hpyitpwarrnaysaw pyaဿnarhkae - tar shi aobharrmarr kalaintaan, darmhamahote pain ray gain me . VideoCOMING UP Play ... hc tot shalyar jhayykwat tarotepyi m nhang koneswalrayy hcait ko kyawwatrwan dutiyanaeabhhoetmajjhim mai saeet hceepwarrrayyko - - dar huusawwawharrako " san hkyaayy hkarr paat k" kyaitetaal hpuu bhuu saw suuthoetaarr nhaint hceepwarrrayy sandashi saw suuthoetaarr nhait u hc loneeat consternation nghaar, days saatmhaat saatlaat hpw int pya parnhaint quaint shayyhaungg pahchcaee mha pw int lainn aanar kanay " san hkyaayy hkarr paat" ko hpw intmaallhoet . huusaw wawharrako pahtawe aalwhar kainnmae hcay hkyinn nghaar hcain nhanganye, k saminewain aalwhar shipartaal, suuthoet aahtuu redolent hpyitkyasai . aasopar htarrsaw hcarpod to myarr soneshonemhu mway saw, darpaymaae texture,atain aanaat nhaint aadhipparalsaalhcunhait '' taanhpoeshi waalyuu hkaesai . popyeeluumyarr 2016 sammatarwaykoutpwal kataeek hkyaayy hkarr paat aakyaunggko hcauthcu hpyitlar kya parpye tae kyaoso hphaan hpwoe toe t hpyitpartaal . nhaint po. po. aantararalmyarrsaw - - darpaymaae po. po. swaysaung hpyitlarsaicliché hphoet san hkyaayy hkarr paat lyawwhkya raan . de shotehtway days eat taithkuloneko pyi pyi hconehcone narrlai raanahcainasaathtaat po. aarayykyeesai taeaahkar aelldeaahkyanetonekabhaalaarar ko aahcarr ponenhaiut htoteway tar hpyitpartaalmakyaarhkan " ponemhaan" san hkyaayy hkarr paat nayhtinesuu aapaw saunggparrmyarrhpyitkyasai - popyee makyaarhkan m htaat aahpyauuraungaahtee Trump htouthkansuu . aasopar Regis aakyaunggko General
3 years ago in #artzone by goldenmyanmar (40)
Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone to getavaluable upvote on your quality post!